Oziọma nke ụbọchị Jenụwarị 17, 2021 na nkọwa nke Pope Francis | Ahụrụ m Jizọs n'anya
Oziọma nke Jenụwarị 17, 2021 na nkọwa nke Pope Francis
Site na akwụkwọ mbụ nke Samuèle
N'ụbọchị ndị ahụ, Samuèle dinara n'ụlọ nsọ nke Onyenwe anyị, ebe igbe nke Chineke dị. Mgbe ahụ Onyenwe anyị kpọrọ: "Samuèle!" o we za, si, Lekwam, b thena ọsọ jekuru Ilai, si, I kpọm, lem. Ọ zara, sị: "Akpọghị m gị, laghachi ụra!" Ọ laghachiri wee hie ụra. Ma Onye-nwe kpọrọ ọzọ: "Samuèle!"; Samuèle biliri gbakwuru Ilaị na-asị: "called kpọrọ m, lee m!" Ma ọ zara ọzọ: "Akpọghị m gị, nwa m, laghachi ụra!" N'ezie Samuèle amabeghị Onyenwe anyị, ma ọ bụ na ekpughebeghị okwu Onyenwe anyị. Onye-nwe kpọrọ ọzọ: "Samuèle!" Na nke ugbo ato; o bilie ọzọ gbara ọsọ gakwuru Ilaị na-asị: "called kpọrọ m, lee m!" Ilai we ghọta na Jehova nākpọ nwa-okorọbia ahu. Eli gwara Samuèle: "Gaa hie ụra, ọ bụrụ na ọ kpọọ gị, ị ga-asị: 'Kwuo, Onyenwe anyị, n'ihi na ohu gị na-ege gị ntị'". Samuèle hiri ụra ebe ya. Onyenwe anyị bịara, guzoro n'akụkụ ya ma kpọọ ya dị ka oge ndị ọzọ: "Samuéle, Samuéle!" Samuele zara ya ozugbo, "Kwue, n'ihi na ohu gị na-ege gị ntị." Samuèle tolitere ma Onyenwe anyị nọnyeere ya, o kweghịkwa ka otu n’ime okwu ya laa ihe ọ bụla.
Ọgụgụ nke abụọ
Umu-nnam, aru adighi-adighi ọcha, kama-ọbughi maka Onye-nwe-ayi, ma Onye-nwe-ayi diri aru. Chineke, Onye mere ka Onye-nwe-ayi tolite, g willji kwa ike-Ya me ka ayi Don'tnu amataghi na aru-unu bu ihe di n’aru Kraist? Onye ọ bụla sonyeere Onyenwe anyị na-eme otu mmụọ na ya. Zere adịghị ọcha! Nmehie ọ bụla mmadụ mere bụ n’èzí ahụ ya; ma onye ọbụla tinyere onwe ya n’adịghị ọcha na-emehie megide ahụ nke ya. Don'tnu amataghi na aru-unu bu ulo nsọ nke Mọ Nsọ, Onye di nime unu? Natara ya n’aka Chukwu ma ọbụghị nke gị. N’ezie, eji ego dị elu zụta unu: ya mere nyenu Chineke otuto n’arụ unu!
Site na Oziọma dị ka Jọn si kwuo
Jn 1,35: 42-XNUMX
N'oge ahụ Jọn nọnyeere mmadụ abụọ n'ime ndị na-eso ụzọ ya, na-elegide anya na Jizọs onye na-agafe, na-ele anya: "Lee nwa atụrụ Chineke!" Ndi n disciplesso uzọ-ya abua, mb hearinge ha nuru okwu ndia, ha we so Jisus. Jisus we chigharia, hu na ha n himso Ya, Ọ si ha, Gini ka unu nāchọ? Ha zara ya, sị, "Rabaị (nke a sụgharịrị ịbụ onye nkuzi) - ebee ka ị bi?" Ọ si ha, Bianu, le. Ha we je hu ebe O biri; ha na Ya we nọgide ubọchi ahu; ọ bụ ihe dị ka elekere anọ nke ehihie. Otu n’ime mmadụ abụọ ahụ nụrụ ihe Jọn kwuru wee soro ya bụ Andru nwanne Saịmọn Pita. O buru ụzọ zute nwanne ya nwoke, bụ́ Saịmọn, wee sị ya: “Anyị ahụwo Mezaịa ahụ” - nke a sụgharịrị ịbụ Kraịst - duru ya gakwuru Jizọs.Mgbe Jizọs legidere ya anya, ọ sịrị: “are bụ Saịmọn, nwa Jọn; A ga-akpọ gị Sifas ”nke pụtara Pita.
Amụtala m ilezi anya n’ime onwe m, nke mere na ụlọ nsọ dị n’obi m bụ naanị maka Mmụọ Nsọ? Ghichaa ụlọ nsọ ahụ, ụlọ nsọ dị n'ime ya ma na-eche nche. Kpachara anya, kpachara anya: gini na-eme n'ime obi gị? Kedu onye na-abịa, onye na-aga ... Gịnị bụ mmetụta gị, echiche gị? I ji Mmụọ Nsọ na-ekwu okwu? You na-ege Mmụọ Nsọ ntị? Kpachara anya. Lezienụ anya n'ihe na-eme n'ụlọ nsọ anyị, n'ime anyị. " (Santa Marta, 24 Nọvemba 2017)
Ihe Jizọs Kraịst kụziri gbasara ekpere
Gịnị ka okooko osisi na-anọchite anya theka?
Amaokwu 3 ị gaghị ahụ na Baịbụl gị